အပူပိုင်းအင်္ဂတေသည်စက်ရုံ, အပူပိုင်း Blender စက်, Powder Pack စက် - QuanHua
အထူးအပူပိုင်း Powder အင်္ဂတေသည်စက်ရုံ
QH-40 စီးရီးအပူပိုင်း Powder အင်္ဂတေသည်စက်ရုံ
QH-60 စီးရီးအပူပိုင်း Powder အင်္ဂတေသည်စက်ရုံ
က Wall PuTTY စက်ရောစပ်
QH-20 ရိုးရှင်းသောအမှတ်တရ PuTTY ရောစပ်စက်
QH-50 ပြည့်အော်တိုအမှတ်တရ PuTTY ရောစပ်စက်
Semi-AUTO Block လုပ်သည့်စက်
အပူပိုင်း Blender စက်
နှစ်ချက် Shaft လှော်ရောနှော
ဘိလပ်မြေ Silo များ
အမှုန့် Pack စက်
valve Bag Pack စက်
NE Chain Bucket ဓါတ်လှေကား
TD ခါးပတ် Bucket ဓါတ်လှေကား
TH Chain Bucket ဓါတ်လှေကား
စက်ရုပ် Palletize စနစ်
အိန္ဒိယ client-15 ပြည့်အော်တိုခြောက်သွေ့တဲ့မော်တာရောနှောစက်ရုံ
မလေးရှား Clients တွေအနေနဲ့အပြည့်အဝ-အော်တိုအပူပိုင်းအင်္ဂတေမော်တာရောနှောစက်ရုံ -25TH
ကာတာနိုင်ငံ client-10th FULL-AUTO ခြောက်သွေ့တဲ့မော်တာရောနှောစက်ရုံ
ရုရှားက client-30 ပြည့်အော်တိုခြောက်သွေ့တဲ့မော်တာရောနှောစက်ရုံ
ယူအေအီး Clients- 15 Semi-အော်တိုခြောက်သွေ့တဲ့မော်တာရောနှောစက်ရုံ
ဥဇဘက် client-20th ပြည့်အော်တိုမျှော်စင်အမျိုးအစားအပူပိုင်းအင်္ဂတေသည်ရောနှောစက်ရုံ
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-18660118268
ခြောက်သွေ့သော MIX မော်တာစက်ရုံ
QH-30 ရိုးရှင်းသောအမျိုးအစားအပူပိုင်းရောသမအင်္ဂတေသည်စက်ရုံတစ်ခုကိုအလျားလိုက် (အနိမ့်စက်ရုံသက်ဆိုင်), အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးအရှိန်မြှသည်ဧရိယာသေးငယ်လျော့နည်းယူနစ်အလုပ်သမား (2-3), [ရောစပ်မြင့်မားသောပစ္စည်းတစ်ခုဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း .. ] ဖတ်ရန်
စက်ရုံကြွေကြွေပြားကော်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည် tile ကော်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, Filler, အပူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် multiplexing စနစ်ကကော်မော်တာ, ပန်းရံမော်တာကိုသုံးပါ [ .. ] ဖတ်ရန်
အဆင်သင့်ရောနှောအင်္ဂတေစက်ရုံအရည်အသွေးမြင့်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်္ဂတေ gypsum နှင့်ကိုယ်ပိုင်-level gypsum ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအင်္ဂတေ gypsum အခြေခံ Level ဖြစ်ပါတယ်။ [ .. ] များ၏ကုန်ကြမ်း ဖတ်ရန်
ရှန်ဒေါင်း QUANHUA IMPORT & Export CO ။ , LTD မှ။
ရုံးချုပ် Quan Hua Group မှ Jinan, စမ်း၏မြို့တွင်တည်ရှိသည်ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှု, သိပ္ပံနည်းကျသုတေသန, အရောင်း, သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ကုန်သွယ်မှုပေါင်းစပ်တဲ့အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Weifang အားစီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိဒါဟာယခုတစ်ခြုံငုံမူဘောင်တည်ဆောက်နေသည် 300 န်ထမ်းနှင့်အတူ 200,000 စတုရန်းမီတာဧရိယာနှင့် 120,000 စတုရန်းမီတာအဆောက်အဦးဧရိယာဖုံးလွှမ်း, ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံလိပ်စာ Anqiu Shiquan စက်မှုပန်းခြံဖြစ်ပါတယ် 2003 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြည့်ဆည်း, အဓိကအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း၏ installation နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ကြသည်။
WE သင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏ ဖော်စပ် အဖြေ, Providence
တရုတ်ခြောက်သွေ့ရောနှောမော်တာစက်ရုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများစက်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ကျနော်တို့နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ခြင်းများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအပေါငျးတို့သဒေသများတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာနိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အနေအထားရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်နှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသေချာ။ Quan Hua အမှတ်တံဆိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လူကြိုက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မလေးရှား, ဗီယက်နမ်, ရုရှား, ကာဇက်စတန်, ဥဇဘက်, မွန်ဂိုလီးယား, ကာတာ, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, အီဂျစ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ကြသည်။ ဖောက်သည်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
စုံလင်သော After-Sales Service
အွန်လိုင်း 24 နာရီ reply သို့မဟုတ်နောက်ကျောကိုပဌနာ
အားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများနှင့် quick- wear အစိတ်အပိုင်းများထောက်ပံ့ရေး
အလုပ်အကိုင်အ-site ကိုမော်တာမှမတူဘဲ 1. ခြောက်သွေ့မော်တာလည်းအလွန်အမင်းထိန်းချုပ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အစုလိုက်နှင့်ရောနှောအပေါ်ဆက်ကပ်အပ်နှံအဆောက်အဦနှင့်အတူစက်ရုံအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Pre-ရောထွေးမော်တာ, ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာကိုယ့်အလုပ် site ကိုရေဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်သည်။
2. ဒါဟာတသမတ်တည်းအရည်အသွေးအားသာချက်များ, ထိန်းချုပ်ထားစာရင်း, အချိန်နှင့်လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ချွေတာရှိပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောဓာတုသည်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်, ကစတာတွေ, နှောင်ကြိုး, အပူနှင့် acoustic insulator တွင်လည်း, crack-ခုခံ, လုပ်ကိုင်နိုင်သော, ရေ-retention ကို, ဝတ်ဆင်-သက်သေပြ, Anti-ချေး၏ဒဏ်ငွေဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်
3. အပူပိုင်းမော်တာအသစ်ကဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုကိုက်ညီနိုင်ပါတယ် ရေးဆွဲရေးတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်။ ဤရွေ့ကား, ကောင်းသောဂုဏ်သတ္တိကိုအလွန်အဆောက်အဦရဲ့အရညျအသှေးနှငျ့ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းကြီးမားတဲ့ဒီဂရီအတွက်မော်တာ၏အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချသာ။
4. ခြောက်သွေ့တဲ့မော်တာများအတွက်ဝယ်လိုအားကြောင့်အလုပ်အကိုင်အ-site ကိုအတွက်ရူးသွပ်သည့်မော်တာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်င်း၏ထူးချွန်ကုသိုလ်ယူဖို့လျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာခဲ့သည်။
သင်သည်သင်၏စက်ရုံထဲမှာခြောက်သွေ့မော်တာစက်ရုံတည်ဆောက်လိုပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ QuanHua ရောနှောအဖွဲ့အပူပိုင်းရောသမအင်္ဂတေသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ဆန်းသစ် Front-အဆုံးအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းသူတို့၏ကျယ်ပြန့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာအသိပညာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရှိအင်ဂျင်နီယာများခြောက်သွေ့သောရောနှောစက်ရုံဒီဇိုင်း, start-up ထောက်ခံမှု, troubleshooting, သင်တန်း, ဒုတိယအမြင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်နှင့်သင့်ခြောက်သွေ့သောရောနှောမော်တာစက်ရုံစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းန်ဆောင်မှုကိုပြင်ဆင်ခြင်း။ သင်တို့သည်ငါတို့၏န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များ၏ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ပြင်ဆင်ထားကြသည်။
ကျနော်တို့ဟာအလွန်လျင်မြန် turnaround နှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ဖြန့်ဝေလိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သူအနည်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အပူပိုင်းမော်တာအပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်စိတ်ကိုခြောက်သွေ့တဲ့ရောနှောမော်တာစက်ရုံကန်ထရိုက်တာမြျှောလငျ့စောငျ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
QuanHua ရောနှောပစ္စည်းကိရိယာစက်စက်ရုံ 300 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ထမ်းနှင့်အတူ 200,000 စတုရန်းမီတာဧရိယာနှင့် 120,000 စတုရန်းမီတာအဆောက်အဦးဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါ ISO9001 နှင့်အီးစံနှင့်အညီအားလုံးကိရိယာများစက်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်အားလုံးစက်ကောင်းကောင်းပြေးသည်အထိတင်းကြပ်စွာစမ်းသပ်ပြီးပါလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အခြမ်းတင်ပို့မတိုင်မီစစ်ဆေးရေးလုပ်ဖို့စီစဉ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်, ထို SGS စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အခြားသူများရှောက်သွားနိုင်ဘူး။
ယင်းမော်တာ Siemens လိုအပ်က2လထုတ်လုပ်မှုအချိန်လိုအပ်မဟုတ်လျှင်ခြောက်သွေ့မော်တာစက်ရုံများထဲမှထားဘို့, အခြားအားလုံးစက် 30-45 ရက်အတွင်းထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုအသုံးပြုပါ။
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျနော်တို့ client များအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုအထုပ်ပူဇော်နှင့် client များအတွက် turnkey စီမံကိန်းကိုကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပေးသမျှသောပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အပြည့်စုံတပ်ဆင်ခနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးန်ဆောင်မှုကိုပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်မြင့်မားသောအတွေ့အကြုံရှိလယ်ကွင်း installers ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' အများဆုံးအတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြသည်။
နေရာချထား & alignment ကို, ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး & ပြုပြင်မွမ်းမံအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Re-installation ကိုဝန်ဆောင်မှုများ, ပြုပြင် & Re-installation ကိုန်ဆောင်မှု။ စွမ်းရည်စနစ်ကဒီဇိုင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများ setting ကို, ပစ္စည်းကိရိယာများရွေ့လျားနေသည့်စနစ်ကို start up & ဝ & စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု & သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှုန်းအမျိုးမျိုးသောသည်အခြားကိရိယာများပါဝင်သည်။
Office ကို Add:
အခန်း 617, Flat က F, အမှတ် 9999, Jingshi လမ်း, Lixia ခရိုင်, Jinan စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
Anqiu Shiquan စက်မှုပန်းခြံ, Weifang အားစီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
Skype ကို: binxuhappy
က Wall PuTTY စက်ရောစပ်၊ အပူပိုင်း Powder Blender ရောနှော၊ အလိုအလျောက်အပူပိုင်းအင်္ဂတေသည်စက်ရုံ၊ အင်္ကျီဖြင့်အခြောက်ခံမော်တာရောနှောစက် ၊ အပူပိုင်း Powder ရောနှောစက်၊ Ldh Plow ရောနှောစက် ၊